Shir Maanta u furmaya DFS, Dowlad Goboleedyada iyo Beesha Caalamka | KEYDMEDIA ONLINE
Shir Maanta u furmaya DFS, Dowlad Goboleedyada iyo Beesha Caalamka
Shirkan waxaa ka qeybgalkiisa qaadacay Axmed Madoobe iyo Deni, kuwaasoo khilaaf kala dhaxeeya Farmaajo dartiisa u diiday inay Muqdisho yimaadaan.
MUQDISHO, Soomaaliya - Maanta oo Isniin ah ayaa lagu wadaa in shir ballaaran uu u furmo madasha iskaashiga ee Partnership Forum, waxaana shirkan ka qeybgali doona mas'uuliyiin DFS ah, kuwa dowlad goboleedyada iyo Beesha Caalamka.
Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa furi doona shirkan, waxaana sidoo kale hadallo jeedin doona Madaxda dowlad goboleedyada, iyadoo shirkaan diiradda lagu saari doono arrimaha doorashooyinka.
Shirkan ayeey madaxdu ku wada-geli doonaan aaladda Zoomka, iyadoo sidoo kale diirada lagu saari doono Amniga, sii wadida dib-u-habeynta garsoorka ganacsiga dhaqaalaha, horumarka xagga deynta cafinta laga gaaray iyo kasoo kabashada duufaan ku dhufatay meelo kamid ah dalka.
DFS waxaa shirkaan si rasmi ah uga qeybgalaya, Ra’iisul Wasaare Rooble, Ra’iisul Wasaare kuxigeenka dalka Mahdi Guuleed, & Wasiirada, Gaashaandhigga, Amniga, Cadaaladda, Dastuurka, Haweenka & Guddoomiyaha Guddiga Madaxa bannaan ee doorashooyinka Qaranka Xaliimo yareey.
Shirkan oo si fool ka fool ah uga furmi lahaa magaalada Muqdisho ayaa waxaa iney magaalada yimaadaan diiday madaxda dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland, waxaana taasi ay keentay in Zoomka lagu balamo.
Mudo labo maalmood ah ayuu shirka socon doonaa, waxaana lagu qabanayaa Xarunta Xalane, iyadoo Deni iyo Axmed Madoobe ay qaab ZOOM ah uga qeybgali doonaan, maadaama ay diideen inay Muqdisho yimaadaan, sababo la xiriira khilaaf kala dhaxeeya Farmaajo.
Hoggaamiyaha maamullada Jubbaland iyo Puntland ayaa aad u dhaliilsan nidaamka Farmaajo ee uu ku doonayo in lagu qabto doorashada iyadoo dhanka kale aysan weli fulin qodobadii lagu heshiiyey ee shirkii Muqdisho ay ku yeesheen Farmaajo iyo dowlad goboleedyada.
Shirka wuxuu kusoo aadayaa xili dalka ay ka jirto xiisad siyaasadeed, islamarkaana madaxa DF iyo Mucaaradka ay ku muransan yihiin doorashooyinka, oo waqtigooda ahaa 1-da inay billowdaan dib uga dhacay.
0 Comments Topics: farmaajo muqdisho rooble soomaaliya